Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - ASFO Chitoro
Ndezvipi zvakanakira kutenga online?
Pane zvakawanda zvakanakira kutenga online: Unogona kuita kutenga kwako chero nguva kana zuva (maawa makumi maviri nematatu / mazuva manomwe pasvondo / mazuva makumi matatu nemashanu Kuendeswa kwezvigadzirwa zvaunodaira kumba kana kukero yaunoratidza; Mitengo yakaderera uye mikana yakasarudzika yekusimudzira yakasarudzika Kuburikidza nedatabase redu, uye mushure mekutenga kwekutanga, maitiro ekutenga anobetserwa kutenga munguva yemberi.
Zvinosungirwa kunyoresa pane webhusaiti kuita kutenga?
Kwete. Kunyoresa hakusi kwekumanikidzwa, asi kunozounza iwe zvakasarudzika zvakanakira! Kuwana kumishandirapamwe uye zvipo zvakakosha: iwe unogashira makuponi, zvinopihwa, zvidzikisira uye nhau mune yako email email! Kutenga nekukurumidza: ingo zadza fomu rehunhengo kamwe, mukutenga mune ramangwana kana data rako rinobva rakanyoreswa. Raira nhoroondo: unogona kugara uchitarisa zvawatenga.
Chii chandinga tenge?
Isu tinoshambadzira zvigadzirwa zvese zvinowanzo kuwanikwa mumafesi emishonga: mishonga inopihwa; Over-the-counter mishonga, zvigadzirwa zvehunyodo uye zvehutsanana, zvekuwedzera zvekudya, orthopedics, pakati pevamwe. Kana iwe ukasawana zvaunoda, ndapota taura nesu!
Chitoro chinotumira invoice here? Kana iwe ukasawana zvaunoda, ndapota taura nesu!
Neodha yega yega invoice yezvigadzirwa zvakatengwa inotumirwa.
Ndine chokwadi chei kuti odhi yangu yagashirwa?
Kana kuraira kwako kuchinge kwapera, uchagamuchira mhinduro ye otomatiki ichikuzivisa iwe kuti yatove ichiitwa.
Zvinogoneka kugamuchira iyo kero pane imwe kero kubva kune yekubhadhara kero?
Hongu. Munguva yekutenga enda zvinotevera: Papeji panotengwa kutenga sarudza sarudzo "Tumira kune dzakasiyana kero" Nenzira iyi iwe unogona kuchinja uye kuratidza kero iyo iwe yaunoda kugamuchira yako oda. Maitiro aya haachinji kero yekubhadhara.
Pane huwandu hwehuwandu hwekutengesa?
Iko hakuna kuderera kukosha kukosha.
Ndinoziva sei kukosha kwandinofanira kubhadhara?
Pakupera kwemaitiro ekutenga, uye nenyaya yezvigadzirwa zvakajeka / mishonga pasina chirairo, iyo sisitimu inozivisa kukosha kunobhadharwa, uko kunosanganisira chero zvidzoreso uye kutumira (kana zvichishandira) Kana uchinge wafanirwa kuwana mishonga yekunyorerwa mushure mezvo gamuchira email ine kukosha kwekupedzisira, izvo zvinosanganisira kubatanidzwa-uye kuderedzwa.
Kwakachengeteka kubhadhara kune webhusaiti here? Idzi yako data yakachengetedzwa here?
Iyo Sousa Torres SA khemisi inowirirana nechero mutemo wekuvanzika. Yako data haizovi pasi pemamiriro api ezvinhu akapihwa kune wechitatu mapato pasina ruzivo rwako uye kubvuma. Iko kushandiswa kweiyo https: // fomati inovimbisa kuchengetedzwa kwekutamisa kwemashoko nedata online.
Ini ndinogona kubhadhara nenzira inoita seyakanyanya kwandiri?
Kufunga kuti iyo nzira yekubhadhara inoenderana nenzira yakasarudzwa yekuzvitakura, mukati mezvinogona kubhadhariswa sarudzo, unogona kusarudza iyo inonyanya kukubatsira.
Kwakachengeteka kubhadhara neKadhi reKwereti?
Paunenge uchizadza iyo yekubhadhara ruzivo, chinzvimbo chakachengeteka chinosimbiswa pakati pebrowser yako neHolay, iyo kambani inoita iyo yekubhadhara yekutengesa. Iyo sevha inoshandiswa yakachengeteka, ine yakasimba encryption, kuitira kuti ivimbise kuchengeteka kweyekubhadhara data nekukurumidza pavanenge vachiridzwa. Mukubhadhara neKiredhiti Kadhi, zita remuridzi wechikwereti richakumbirwa, zuva rekubuda iri kodhi redziviriro, inowanikwa mundima yekadhi, kurudyi nzvimbo yenzvimbo yakachengeterwa siginecha yekadhi. akabata, inosanganisira matatu manhamba, iyo CVV (yekubvumikisa kodhi). Kuita iyi yekuTenga maitiro kuve akachengeteka zvakanyanya, isu tinoda kuti, mukushandiswa kweKadhi reKadhi, rovera manhamba matatu kana mana ekodhi chengetedzo (CVV). Sezvo iyo code iri chikamu chekadhi, chero kuedza kwekunyepa kunodzivirirwa zvakachengeteka.
Ndingarega sei kuraira?
Kana iwe uchifunga kuzviita, zviite nekukurumidza sezvinobvira. Kuti uve nechokwadi chekubviswa, iwe unofanirwa kubata Vatengi Kutsigirwa kuti uone kana ichiri yekutumira. Kana iri iyo yatove yakapihwa, hazvigone kufunga nezve kubviswa.